FAMPAHALALANA SY SARY MINI DOG SCHNAUZER DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary Mini Dog Schnauzer Dog
Duc the Mini Schnauzer amin'ny faha-5 taonany— 'Duc dia Mini Schnauzer 5 taona. Voasoratra ho sira sy dipoavatra izy fa sarotra ny mahita ny sakay! Lazainay fa 'blond' izy fa marani-tsaina kokoa! Nofanina izy mba tsy hitraka, ka rehefa mandinika isika dia mety hisy zavatra tsy mety. Tiany ny milalao kilalao ary milalao irery samirery. Tena liana te hahafantatra sy be fitiavana izy, tia ny ho akaiky antsika ary hahafantatra ny misy antsika amin'ny fotoana rehetra. Tia olona izy, nefa mirona hitandrina rehefa mifanena amin'ny olona vaovao. Tombanany isaky ny tranga ny alika ary mamaritra raha ho mpinamana na fahavalo izy ireo. Manana aretin'alika lehibe izy! '
Ny Miniature Schnauzer dia alika kely miorina mafy. Ny vatana dia efa-joro sy mirazotra. Ny loha mafy dia mahitsizoro endrika. Ny sakan'ny loha dia somary kely avy eo amin'ny sofina ka hatrany amin'ny maso. Mahery ny vavam-borona ary mifarana tampoka. Mainty ny orona. Hety ilay manaikitra. Ny maso lalina sy madinidinika dia mainty volontany. Ny sofina avo eo an-doha matetika dia potehina amin'ny teboka iray. Rehefa avela voajanahary ny sofina dia kely sy miendrika V izy, miforitra eo akaikin'ny loha. Mahitsy ny tongotra eo anoloana. Ny rambony miorim-paka dia napetraka avo sy nakarina. Ny rambony dia voakapa kely fotsiny mba hahitana azy eo ambonin'ny lamosin'ny alika. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny mamboly na miantsona ny sofina na ny rambon'ny alika any amin'ny ankamaroan'ny faritra any Eropa. Ny Mini Schnauzer dia manana palitao roa sosona. Ny palitao ivelany dia wiry ary malefaka ny palitao. Tapahina ny palitao ka misy volombava sy volombava ary volomaso. Ny loko palitao dia misy ny mainty, fotsy, sira sy dipoavatra ary mainty sy volafotsy.
Ny Miniature Schnauzer dia alika manan-tsaina, be fitiavana ary falifaly. Matanjaka, milalao, mifanerasera tsara amin'ny ankizy izy ary tia miaraka amin'ny olony. Tiavo, mailaka, be fandavan-tena ary mahomby. Amin'ny alàlan'ny fitarihana mety dia afaka mifanaraka amin'ny alika hafa. hifanerasera tsara ity karazany ity. Mahatonga ny mpiara-mitory sy ny biby fiompy tsara izany. Ny Mini Schnauzer dia tsy hihaino raha mahatsapa izy fa mahery saina kokoa noho ny tompony. Ny tompony dia mila milamina, nefa hentitra, manana rivotra voajanahary amin'ny fahefana. Ireo alika ireo dia tsy manana hodi-kazo mahafaly, fa mandre feo toy ny fidradradradradran'ny feo. Ity karazana ity dia manao mpiambina mpiambina sy vermin tsara. Alika mora mandeha. Ny sasany dia azo atokisana amin'ny olon-tsy fantatra raha tsy manome fitoniana amin'ny fiainany ny olombelona, ​​fa ny ankamaroan'ny olona kosa tia. Aza avela hivoatra ity alika kely ity Syndrome kely alika , fitondran-tenan'ny olona entin'ny alika itantanana ny trano. Izany dia mety hiteraka ambaratonga samihafa olan'ny fitondran-tena , ao anatin'izany, fa tsy voafetra ho fanahiana fisarahana , fanahy iniana, mitaintaina, mikotrika, fiambenana , sahy, indraindray tezitra, ary tsy misalasala manafika alika lehibe kokoa. Alika mahay mandanjalanja ary mahazo ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana hanana toetra hafa tanteraka. Tsy toetra Miniature Schnauzer ireo, fa ny fihetsika entin'ny fomba itondran'ny alika ny olona manodidina azy. Miankina amin'ny olombelona daholo izany. Raha vantany vao manomboka tena mpitondra entana ny olombelona dia hiova ho tsara kokoa ny fihetsiky ny alika.
Hahavony: 12 - 14 santimetatra (30 - 36 cm)
Lanja: 10 - 15 pounds (5 - 7 kg)
Mora voan'ny aretin'aty, vato voa, diabeta, aretin-koditra, aretin'i von Willebrand ary kista. Ny olan'ny maso mandova koa. Mora mahazo lanja, aza mavesatra ny sakafo.
Ny Miniature Schnauzer dia alika tsara ho an'ny fiainana an-trano ary milamina ao an-trano raha mbola manana fanatanjahan-tena ampy.
Ireto alika kely mavitrika ireto dia mila isan'andro, lava, mailaka, mandeha na mihazakazaka , ary ny lalao filalaovana fitiavana eny an-dàlana. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Ampianaro izy ireo hiditra sy hivoaka ny varavarana sy ny vavahady aorian'ny olombelona.
Tokony ho 15 taona. Tsy mampiseho famantarana ny taona raha tsy tara amin'ny andro.
Ny akanjo palitao dia tsy sarotra ampiakarina, na dia mila fiheverana aza izy io. Mikorisa sy borosy isan'andro amin'ny borosy tariby fohy hisorohana ny fikororohana. Raha misy tsihy hiseho dia tokony hokapaina izy ireo. Tokony hokapohina mandritra ny halavany indroa isan-taona izy ireo amin'ny lohataona sy amin'ny fararano. Arosoy manodidina ny masonao sy ny sofinao amin'ny hety matevina ary diovy ny volombava aorian'ny sakafo. Amin'ny alika mpiompy, ny palitao dia matetika nohetezina fohy amin'ny vatany ambony ary avela somary lava kokoa eo ambanin'ny faritra, tongotra sy loha. Ny alika aseho dia mila esorina amin'ny tànana sy haingon-tanana fa tsy hokapohina. Ity karazana ity dia mandena kely tsy misy volo ary alika tsara ho an'ireo marary allergy.
Ny Miniature Schnauzer dia karazany alemana. Nandritra ny taona manodidina ny fiandohan'ny taonjato, dia samy Pinscher Alemanina malefaka ary Schnauzer volo maditra saribakoly niseho ihany tamin'ireny koa. Ny German Pinscher Schnauzer Club dia nanangana politika mitaky porofon'ny zana-dahatry ny palitao Schnauzer volo maditra ho an'ny fisoratana anarana. Izy io dia nanampy haingana hametraka karazana ary nahatonga azy ireo ho karazana miavaka amin'ny Pinscher Alemanina . Ireo Schnauzers ireo dia nomena anarana hoe Standard Schnauzer. Ny Schnauzers kely dia novolavolaina tamin'ny fiampitana kely Schnauzers mahazatra miaraka amin'ny Affenpinscher ary angamba ny Poodle . Ny anarana Schnauzer dia nalaina avy amin'ny teny alemà 'Schnauze,' izay midika hoe 'molotra.' Nampiasaina ho toy ny ratter ary mbola mitazona ny fahaiza-manao, fa alika mpiara-miasa ankehitriny. Ny sasany amin'ireo talentan'i Schnauzer dia misy: fihazana, fanarahan-dia, fanamafisam-peo, mpiambina, fankatoavana mifaninana ary fanaovana hafetsena.
Buba sy Boomer ny Mini Schnauzers
Joseph Dale (Joey) ny Miniature Schnauzer amin'ny 4 taona— 'Namoy azy ny sakaiza iray trano ary nangataka anay hitazona azy mandra-pahitany trano hafa. Tonga teto amintsika izy feno fatotra! Notapahinay izy ary nomenay volo fohy. Rehefa afaka herintaona teo dia nahazo trano izy nefa tsy zakany ny vola fanampiny hitazomana ilay alika ka nilaza izy fa hikarakara azy tsara kokoa izahay avy eo dia tazomy izy. Nahazo azy izahay neutered ary nanamarina ny hopitaly. Hay izy manana aretin-koditra ary ny mpitsabo dia nilaza taminay mba hanome azy Benadryl amin'ny AM sy PM. Ataontsika fohy izy mba hahafantarantsika raha mikorontana na milelaka izy. Tsy nopetahana mihitsy ny sofiny ary tsy voahidy ny rambony fa tianay toy izao izy. '
Pepper the Miniature Schnauzer amin'ny 2 taona
Litter of Miniature Schnauzer alika kely
'Salama, SGT Wynston no anarako! Miniature Schnauzer mainty aho ary vao 4 taona aho. Azoko atao ny milaza fa alika mandehandeha aho, efa nitsidika an'i KY, TN, GA, FL ary Key West mba hanonona vitsivitsy fotsiny! Tiako ny mitaingina fiara, mandeha an-tongotra , milalaova amin'ny kilalao sy dihy ho an'ny sakafoko! Ny tompoko dia milaza amiko isan'andro fa tena mahay aho -) Raha manontany ahy ianao dia tena tsy izy aho amboa mihitsy, izaho dia Olona tongotra 4 ... hodi-kazo !! '
Hijery ohatra misimisy momba ny Miniature Schnauzer
Sary kely Schnauzer 1
Sary kely Schnauzer 2
Sary kely Schnauzer Mini 3
Sary kely Schnauzer 4
alika kely labrador 4 volana
inona ny alika anaty ala?
amerikana bulldog pitbull mifangaro toetra